Nafaqa darro ka jirta degaanka God'aalo ee gobolka Sool
Radio Ergo 11 May, 2017 SOOL
1600 oo qoys oo xoolihii ka dhamaadeen ayaa degsiimaystay duleedka deegaanka God'aalo oo magaalada Laascaanood 145km dhinaca bari ka xigta. Carruurta iyo dadka waayeelka ah ayaa waxaa haysta nafaqa daro.
Xarun xanaanada hooyada iyo dhallaanka ah oo ah goobta keliya ee caafimaad ee ku taal tuulada God'aalo ayaa sheegtay in shalay oo Arbaca ah ay jiifaan 45 carruur ah oo nafaqa darro hayso. Waxay sheegtay xaruntu in saddexdii bilood ee ugu danbaysay ay nafaqa darro ka daaweeyeen 2500 oo qof oo 2200 oo ka mid ahi yihiin carruur, halka 300 oo kalana yihiin dad waaweyn. Xarunta MHC ah oo ka kooban 4 qol ayaa buuxda. Waxaa warbixintaan inoo haya weriyaha Ergo ee gobolka Sool Faarax Dubad.
Qoysas hor leh oo abaaraha koonfurta Mudug ku barakacaya